Soo dejisan Microsoft Office Mobile 15.0.4522.2000 – Vessoft
AndroidXafiiskaSoftware softwareMicrosoft Office Mobile
Bogga rasmiga ah: Microsoft Office Mobile
Microsoft Office Mobile – go’an of software in ay la shaqeeyaan waraaqaha Word, Excel iyo PowerPoint. Software ayaa u saamaxaaya in ay abuuraan iyo edit waraaqaha qoraalka Word ama loox Excel ah, oo la shaqeeya bandhigyo, ku dar qoraalada, u isticmaalaan jaantus iwm Microsoft Office Mobile si toos ah optimizes qoraallada si loo size lagama maarmaanka u ah isticmaalka habboon ee qalabka la kala duwan ah screen xal. Software wuxuu hubinayaa waafaqsan xogta ugu badan ee codsiyada kale ee Microsoft Office oo ku saabsan nidaamyada hawlgalka kala duwan. Software wuxuu bixiyaa helaan waraaqaha lagu kaydiyo, OneDrive ka DropBox iyo storages daruur SharePoint. Sidoo kale Microsoft Office Mobile kuu ogolaanaya in aad warqado in dhawaan isticmaalo kombiyuutar shaqeeyaan iyo edit xogta ku lifaaqan e-mail ah.
La shaqee Word, Excel iyo waraaqaha PowerPoint
.Wadashaqayntaas La kombiyuutarka
Ayna ka mid ah size shaashadda
Isticmaala kaydinta daruurtii
Saves muuqaalka inta lagu guda jiro tafatirka dukumentiyada
Soo dejisan Microsoft Office Mobile
Faallo ku saabsan Microsoft Office Mobile
Microsoft Office Mobile Xirfadaha la xiriira